ရှဲ (တူရိယာ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှဲ သည် ဒေါင်လိုက်ပိုက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထား သည့် လွင့်မျောသည့် ကြိုးစပါသည့်တစ်ပင်တိုင် ကျူပင် တူရိယာမျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တစ်ပြိုင်နက်အသံများစွာထွက်သည့် တူရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်တော်တူရိယာအဖြစ်လူကြိုက်များလာသည်။
၁.၁ ရိုးရာ ရှဲတူရိယာ
ယုလင် လှိုဏ်ဂူ မှ ထန်မင်းဆက်ခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာအနုပညာသည် များ၏ပုံနှင့် တီးမှုတ်နေသည့် ရှဲတူရိယာအပါအဝင်တူရိယာအမျိုးမျိုးကို ပြသသည်
တရုတ်တစ်ပင်တိုင် ကျူပင်လေမှုတ်တူရိယာ၏အမည်မှာ ဟီဖြစ်ပြီး ယုတူရိယာကို ဘီစီ ၁၄- ၁၂,ရာစုနှစ် အရိုးစာရေးသားချက်ကျမ်း၏ နောက်ပိုင်းထဲ၌ ရှဲအမျိုးအစားများအကြောင်း ဖော်ထုတ်ထားခဲ့ကြသည်။ "ရှဲ" အဆိုပါစကားလုံး၏ ပထမဦးဆုံးအသွင်အပြင်ကို ကဗျာအချို့၌ (အိုဒေးသ၏စာအုပ်) ဖော်ပြထားသည် ။ ဘီစီ ၇ ရာစုခုခေတ် ။ ဝါး သို့မဟုတ် သတ္တုကျူလုံးများဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ဂေါ်ဖလေပူခန်းများ၊ အမျိုးမျိုးသောပိုက်များပါဝင်သည့် ရှေးဟောင်းကိရိယာများကို မျက်မှောက်ခေတ် ဟူဘေးပြည်နယ်ရှိ Marquis ယိ ၏ဂူ (ဘီစီ ၄၃၃ ခန့်) ၏ သင်္ချိုင်း နှင့် ဟူနန်ပြည်နယ်ရှိ (ဘီစီ၂ရာစုခေတ်) မာဝင်ဒူအီဟန်သင်္ချိုင်း များတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည် ။
ရှဲ - ဝါဆော ရှိအာရှနှင့်ပစိဖိတ်ပြတိုက်
တရုတ်မြောက်ပိုင်းထုံးတမ်းစဉ်လာဂီတ၊ kunqu နှင့် Jiangnan sizhu ensembles များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်ရိုးရာ sheng ( iny 笙, pinyin : chuántǒngshēng ) သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုက် ၁၇ ခုရှိသော်လည်း ၁၃ သို့မဟုတ် ၁၄ သံသာရှိသောပိုက်များရှိသည်။ ၎င်း၏စကေးမှာအဓိကအားဖြင့် diatonic ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Jiangnan sizhu တွင်အသုံးပြုသော ၁၇- ပိုက် (၄ ခုအသံတိတ်အလှဆင်သည့်ပိုက်များဖြစ်သည်) ညှိသည်။
 ၂၀ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်တရုတ်ပြည်တွင်ဂီတ တေးသံများ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှရှန်သည်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်မှုနှင့်အသံပမာဏကိုပြောင်းလဲရန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Guoyue sheng တွင်၎င်း၏ပိုက် ၁၇ ခုလုံးတွင်ကျူပင်များတပ်ဆင်ထားပြီး၊ ထို့နောက်ပိုက်အရေအတွက်မှာ ၂၁ အထိတိုးလာပြီးအသံကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေရန်ဝါးပိုက်များနှင့်သတ္တုပြွန်များကိုတွဲထားသည်။ အခြားအပြောင်းအလဲနှိပ်ပါ Sheng ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ရိုးရာ sheng သည်တစ်ကိုယ်တော် repertoire အတွက်သာအသုံးပြုသည်။ ၄ င်းတို့သည်အပြည့်အ ၀ chromatic မဟုတ်သောကြောင့် (အချို့သောနည်းစနစ်များ - glissandi ကဲ့သို့သောရိုးရာ sheng တွင်သာရရှိနိုင်သည်) ။ သံစုံတီးဝိုင်း setting တွင် key sheng များသည် chromatic အပြည့်အ ၀ ရရှိရန်ပိုမိုနှစ်သက်လေ့ရှိသည်။ မှတ်သားထိုက်သည်မှာခေတ်သစ်ရိုးရာရိုးတံများ၌လွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်ရန်သော့အချို့နှင့်ပါလာသည်။ အပြည့်အဝ chromatic ရိုးရာ shengs လည်းရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်ရိုးရာ sheng ကဲ့သို့လက်ချောင်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့်၎င်းအားရိုးရာ sheng ဟူသောစောင်ဝေါဟာရအားဖြင့်လူသိများသည်။ ထို့အပြင်ရိုးရာ sheng များသည်များသောအားဖြင့်ကစားသောအခါသူ၏လက်၌ကိုင်ထားလေ့ရှိပြီး ၃၇ ကျူလုံးအပြည့်အ ၀ chromatic ရိုးရာ sheng သည်ရှည်လျားသောဖျော်ဖြေမှုများအတွက်အလွန်လေးလွန်းလေ့ရှိသည်။
ကျူပင်၃၆ပေါက်ပါသည့် ဆောပရန်နို ရှဲ တူရိယာ
ကျူပင်ပေါက် ၂၄ခုမှ ၂၆ခု တစ်ဆက်တည်းပါသည့် ရှဲများသည် ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိ ပုံစံသစ်များတွင် ကျူလး ၃၂ မှ ၃၈ အထိရှိသည်။ ဆောပရန်နို၊ အာတို၊ တေနော နှင့် ဘက်စ် စသည်တို့ကိုအဓိကဖွဲ့စည်းထားသော ကီးရှဲသည် လေးခုရှိသည်။ အားလုံးသည်သူတို့အကွာအဝေညီမျှ၍ တစ်လျှောက်လုံး တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ရိုးရာတီးမှုတ်ပုံများနှင့် ကွဲပြားခြားနားစွာဒီဇိုင်းပုံစံပြောင်းလဲထားခြင်းကြောင့် လက်ချောင်းများမပါဘဲပြောင်းလဲမှုများကိုရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဂီတပညာရှင်၏ပေါင်ပေါ်၌ တီးမှုတ်နေစဉ်သို့မဟုတ်ရပ်တည်ချက်တွင်ထားလေ့ရှိသည်ဟူသောအချက်နှင့်၎င်းတို့၏ရိုးရာတီးမှုတ်ပုံများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
အာလ်တိုရှဲ ( 中 音 笙, Pinyin Zhōngyīn Sheng)5မှ C3 ၏ အာလ်တို အကွာအဝေးနဲ့ 36-ကျူပင်ပေါက် ၃၆ခုရှိသည့် ရှဲတူရိယာဖြစ်သည်။ ထိုတူရိယာသည် ဆောပရန်နို ရှဲတူရိယာအောက် ကျုပင်ပေါက် ၅ခုလျော့နည်းသည်။၄ င်းတို့တွင်နောက်ထပ်အနက်ရောင်ခလုတ် ၁၂ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အောက်တိုဘာအမျိုးမျိုးတွင်တူညီသောမှတ်စုနှင့်သက်ဆိုင်သောပိုက် ၃ လုံးလုံးကိုဖွင့်နိုင်သည် (ဥပမာ -“ C” အနက်ရောင်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်မှတ်စုများ C3, C4 နှင့် C5 ကိုတစ်ပြိုင်တည်းမြည်စေသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့် treble (octave down) နှင့် alto clefs (၂ ဝ ၁ ဝပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းများ၌ဖြစ်လေ့မရှိသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့် စင်ကာပူတရုတ်သံစုံတီးဝိုင်းသည် Alble Sheng ရမှတ်များကိုထရီဘယ်လ်၌တွေ့ရှိရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း) ကိုအသုံးပြုသည်။ Alto အမျိုးအစားများသည် Soprano Sheng ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုသော metallic sound ထက်ပိုမိုနူးညံ့သော timbre ရှိသည်။ ဒေသတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသတိပြုသင့်သည် - နိုင်ငံများစွာတွင် C3 မှ B5 အထိ Alto Sheng များရှိကြသော်လည်းအချို့ဒေသဆိုင်ရာမူကွဲများသည် G2 မှ F #5(ဆိုလိုသည်မှာ Tenor Sheng ၏အကွာအဝေး) ရှိသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများရှိ ထိုင်ဝမ် မှ Sheng ကစားသမားများ 
↑ Witzleben, J. Lawrence (1995).
↑ 《笙聲不息》 (in zh-TW) (2018-05-28)။
Alan R. Thrasher၊ Sheng ဆောင်းပါး၊ Grove ဂီတအွန်လိုင်း၊ အောက်စ်ဖို့ဂီတအွန်လိုင်း။
Chisholm၊ Hugh, ed. (1911)။ "Cheng" ။ Encyclopædia Britannica (11th ed.)။ Cambridge University Press။ Cite has empty unknown parameters: |HIDE_PARAMETER15=၊ |HIDE_PARAMETER13=၊ |HIDE_PARAMETER14c=၊ |HIDE_PARAMETER14=၊ |HIDE_PARAMETER9=၊ |HIDE_PARAMETER3=၊ |HIDE_PARAMETER1=၊ |HIDE_PARAMETER4=၊ |HIDE_PARAMETER2=၊ |HIDE_PARAMETER8=၊ |HIDE_PARAMETER20=၊ |HIDE_PARAMETER5=၊ |HIDE_PARAMETER7=၊ |HIDE_PARAMETER10=၊ |separator=၊ |HIDE_PARAMETER14b=၊ |HIDE_PARAMETER6=၊ |HIDE_PARAMETER11=, နှင့် |HIDE_PARAMETER12= (အကူအညီ)
Sheng - ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းမှ တရုတ်ခံတွင်းကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ
The Free Free-Reed, Inc. ဂန္ထဝင်ဂီတတွင်အခမဲ့ရိဒ်တူရိယာများ၏သမိုင်း
YouTube ဗွီဒီယို - မာစတာဆန်ကစားသမား Hu Tianquan (胡天泉) ၏အိမ်သို့အလည်အပတ် - အပိုင်း ၁၊ အပိုင်း ၂၊ အပိုင်း ၃
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှဲ_(တူရိယာ)&oldid=698503" မှ ရယူရန်